Dad Hor leh oo u geeriyooday Roobabka ka da'aya magaalada Muqdisho – SBC
Dad Hor leh oo u geeriyooday Roobabka ka da'aya magaalada Muqdisho
Posted by editor on Julaay 15, 2011 Comments
Ku dhowaad 4 qof ayaa u geeriyooday 24tii saac ee la soo dhaafay roobab mahiigaan ah oo ka da’ayay Magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya, waxaanay dadkaasi isugu jiraan dad dhalin yaro ah iyo caruur waxaana ay ka mid yihin dad dhowaan ku yimid magaalada Muqdisho qaab Barakac ah iyagoona ka soo hayaamay dhanka iyo gobolada Baay iyo Bakool.
Dakani ayaa waxaa heysata gaajo iyo diif kala duwan, iyadoona inta badan dhibaatooyinka laga dareemayo ay ka mid tahay roobabka xiligani ka curtay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka.
Dadkani ayaa sababaha ay u dhiteen ay ka mid tahay iyagoo markii hore dhibaatooyin heysteen hadana markii ay Muqdisho soo gaareen ay ugu darsantay Roobabka Mahiigaanka ah ee aan laheyn meel ay ka galaan, waxaana na loo sheegay in dadkaasi qaarkood ay u geeriyoodeen xanuuno haayay.
Sikastaba ha ahaatee magaalada Muqdisho ayaa waxay ka mid tahay goobaha ugu waaweyn ee ay dadka ka soo cararay abaaraha ka jira dalka gaar ahaan koonfurta Soomaaliya ay gaareen iyadoona aan jirin ilaa iyo hada Gar gaar ku filan oo dadkaasi gaaray iyadoona ay weli ku sii qul qulayaan dadkaasi.
dhowaan ayay aheyd markii gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ku baaqay in ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka waxtari kara dadkaasi ay bixiyaan wax alaala wixii ay awoodaan oo ay ku caawinayaan dadkaasi, waxaana jirtay Maalmihii aynu soo dhaafnay dhaq dhaqaaqyo ay DKMG ah ka sameysay wax u qabadka dadkaasi.
Sikastaba ha ahaatee xaalada ugu weyn ee dadkaasi heysata waxa ay tahay Hoyla’aan kuwaas oo xligan sababta ay u geeriyoonayaan ay tahay maadaama aysan heysan meel ay ka galaan roobabka ka da’aya Muqdisho.